Momba anay - Beijing Meeden Top Culture Article Co., Ltd.
Meeden dia ho an'ny kanto
no teny filamatray
Ny tantara dia nanomboka ary haharitra an-jato maro. Ny pejy vaovao dia mbola tokony hosoratana sy volavolaina amin'ny tanana an-tapitrisany.
Miorina am-pireharehana any Shina, tao anatin'ny 15 taona lasa, Meeden dia niampita ny ranomasina ary nahatratra firenena 120 mihoatra ny kaontinanta 5. Manao ny tenantsika ho olom-pirenenan'izao tontolo izao isika.
Nandritra ny taona maro dia miara-mivoatra amin'ireo mpanjifanay mahatoky izahay. Mandray ny aingam-panahy avy amin'ny kolontsaina samihafa izahay, miditra amin'ny birao, sekoly, fianakaviana, studio ary sehatry ny zavakanto hafa miaraka amin'ny marika Meeden. Miaraka amin'ny teny filamatray "Meeden dia ho an'ny kanto", hiroso amin'ny sehatry ny famatsiana zavakanto isika.
Miaraka amin'ny filantsika dia nanangana ny tantara ho an'ny zavakanto sy ny famoronana isika. Na mafy aza ny lalana, tsy mijanona mihitsy izahay fa manohy hatrany, satria manao ny tsara indrindra no iraka ataontsika. Ary ny famokarana no fiasa aseho amin'ireo zavamaniry kilasy ambony 5 mahery
Nanomboka izahay, ary ho eo anilanao mandritra ny taranaka maro, miaraka amin'ny vokatra tena tsara ho an'ny fanoratana, ny sary, ny hosodoko, ny fandokoana ary ny maodely. Ny fanovana ny fihetsikao ho lasa hevitra sy fahitana no tanjona tsy misy farany ho anay.
Beijing Meeden Top Culture Article Co., Ltd. dia miompana amin'ny karazana famatsian-java-kanto.
Fandokoana an'izao tontolo izao. Miezaha hanao loko maro an'izao tontolo izao, nanomboka ny taona 2006 ny famoahana zavakanto Meeden.
Ny famoronana no fanambintsika, ny mora ary ny loko no talentantsika.
Ny orinasanay dia mampifangaro ny R&D, ny famolavolana, ny famokarana, ny varotra, ny serivisy ary ny varotra fanafarana entana sy fanondranana mba hanomezana tolotra feno sy lehibe ny lafiny telo amin'ny mpanjifa.
Ny vokatray dia aondrana any amin'ny firenena maherin'ny 50, ao anatin'izany ny Etazonia, ny firaisana eropeana, aostralia ary Japon. miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra tsara sy laza tsara, nahazo fankasitrahana fatratra izahay ary nankalazaina be avy amin'ny mpanjifa anatiny sy avy any ivelany tamin'ny alàlan'ny varotra B ka hatramin'ny B sy B hatramin'ny C modely varotra. mifikitra amin'ny filozofian'ny orinasa "ny mpanjifa aloha, ny kalitao aloha, ny firaisankina ary ny fahombiazany", manohy mandroso, manavao ary manavao, ary manolo-tena hanome ny mpanjifa serivisy kalitao tsara indrindra ary hiezaka hampitombo ny sandan'ny mpanjifa tsirairay.
Ny vokatra lehibe an'i Meeden dia misy vokatra an'arivony ao amin'ny sokajy 7, ao anatin'izany ny seta hosodoko kanto, hosodoko kanto, sary hosodoko, paleta, taratasy fanaovana sary, borosy ary fitaovana fanaovana hosodoko.
Bebe kokoa avy amin'ny portfolio-nay
Meeden dia ho an'ny kanto, ho anao koa. Eto izahay.